नेपालमै पहिलो छालाको प्याथोलोजी सेवा भरतपुरमै – Chitwan Post
नेपालमै पहिलो छालाको प्याथोलोजी सेवा भरतपुरमै
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेष्ठ १, २०७६
भरतपुर । भरतपुरलाई मेडिकल सिटी बनाउने बहस बाहिर आइरहँदा भरतपुरमा नै नेपालमै पहिलो छालाको प्याथोलोजी सेवा पनि पाइएको छ ।
छालाको मासु झिकेर छालामा क्यान्सर वा एलर्जी वा दाद पत्ता लगाउने नेपालमै प्रथम भएको र देशविदेशबाट नै मासु परीक्षणका निम्ति यहीँ पठाउने गरिएको बताउँछन् छाला, यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डा. अच्युत पोखरेल । यस्तै, कपाल झरेर तालु खुइलिएकाहरुका लागि ‘भगवान्’ भइदिएका छन्, डा. अच्युत पोखरेल । उनी भन्छन्, ‘कपाल झर्ने समस्या महिला–पुरूष दुवैमा छ र प्रत्यारोपण गर्नतर्फ सचेतता बढ्दै गइरहेको छ ।’
काठमाडौँ युनिभर्सिटी, मणिपालबाट एमबीबीएस सकेका उनले फिलिपिन्सबाट एमडी गरेका हुन् । साथै, अमेरिकाबाट एफआइएसडिपी गर्ने पहिलो नेपाली हुन् उनी । ग्रेन्डी इन्टरनेसनल हस्पिटलमा डिपार्टमेन्ट हेडको अनुभव सँगालिसकेका उनले आफ्नै गृहनगरमै छाला र कपालको क्लिनिक खोल्ने सोच पलाएको बताउँछन् । भरतपुर चौबीसकोठीमा त ‘चितवन स्किन क्लिनिक’ पनि खोलिसकेको बताउँछन् उनी ।
‘हेयर ट्रान्सप्लान्ट गर्न नेपालमा जोखिम थियो, कारण नेपालीहरु कपाल प्रत्यारोपण गर्न डराउँथे’, उनी भन्छन्, ‘हाम्रोमा कपाल प्रत्यारोपण गर्न अहिले पनि डराउँछन्, कतिलाई त कपाल प्रत्यारोपण गर्दा क्यान्सर पनि हुन्छ भन्ने भ्रम छ, त्यसकारण मान्छेलाई कन्भिन्स गर्न निकै गाह्रो थियो ।’
कतिपय मान्छे शरीरको सुन्दरतामा मुख्य भूमिका खेल्ने छाला तथा कपालसम्बन्धी समस्या भन्न लाज मान्ने स्वभावका भएकाले पनि स्थिति सहज नभएको उनी बताउँछन् । ‘सुरूवाती चरणमा नेपालमा हेयर ट्रान्सप्लान्ट पनि हुन्छ र ? भन्नेहरु थिए, यो अवसर पनि हो’, उनी सुनाउँछन् ।
जोखिमका बाबजुद पनि कपाल प्रत्यारोपण गर्ने पेसा रोजे उनले । अहिले आफ्ना ग्राहक देशभित्र मात्र नभई देशबाहिर समेत रहेको उनी बताउँछन् । मुडुलो आएकाहरुको टाउको कपाल प्रत्यारोपण गरेर भरिलो बनाइदिने गरेका डा. अच्युत पोखरेल ग्राहकहरु खुसी हुने गरेको सुनाउँछन् ।’
डा. पोखरेलले भने, ‘लेजरले अनुहार तथा शरीरका विभिन्न भागमा पलाएका अनावश्यक रौँ हटाउँदा स्थायी समाधान हुन्छ, बेलाबेलामा सामान्य टचअप गर्ने हो भने लेजर गरेर हटाइएका रौँ फेरि पलाउँदैन ।’ खोजका साथै अनुसन्धानबाट बिरामीको उपचार गर्नु चिकित्सकको पेसागत कर्तव्य ठान्ने डा. पोखरेलकहाँ अहिले अनुहार तथा गोडामा अनावश्यक रौँ भएका महिलाहरु लेजर प्रविधिबाट रौँ हटाउन आउने गरेका छन् । लेजरबाट रौँ हटाउँदा दीर्घकालीन हुने र खासै महँगो पनि नपर्ने भएकाले महिलाहरु यसतर्फ आकर्षित भएको डा. पोखरेलले बताए ।
पिआरपी गरेपछि कपालको जरामा पर्याप्त मात्रामा खाद्य त¤व पुग्छ, र कपाल आउँछ । सुईमार्फत पिआरपीको सहायताले पहिलो नम्बरमा कपाल झर्न रोकिन्छ । सबै उमेर समूहमा पिआरपी गर्न मिल्छ । सामान्यतया बालबालिकाको कपाल झर्ने समस्या हुँदैन । १२ वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहमा पिआरपी गर्न सकिन्छ । साठी वर्षभन्दा पाका उमेरका मानिसमा जवानीमा जस्तो कपाल पलाउँछ भन्ने पनि हुँदैन । तर, बुढेसकालमा पनि कपालको पिआरपी नगरिने भने होइन ।
धेरैजसो २० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका मानिस कपाल झर्ने समस्या लिएर आउँछन् । पिआरपी पनि जवानी उमेर समूहमै धेरै गरिन्छ । ‘चितवन स्किन क्लिनिक’मा कपालको समस्या लिएर आउनेमध्मे अधिकांश २० देखि ५० वर्ष उमेरकै हुन्छन् । महिलाको तुलनामा पुरूष धेरै आउँछन् । तर, महिला पनि त्यत्तिकै आउँछन् । कपालको पिआरपी गर्न महिनामा करिब ३०–४० जना आउँछन् ।
पिआरपीको जोखिम हुँदैन, जुन कपाल उमार्ने अत्यन्तै सुरक्षित तरिका हो । पिआरपी गरेर कपाल उमार्दा जोखिम शून्य हुन्छ । आफ्नै शरीरको रगत निकालेर प्रशोधनमात्रै गरिन्छ । कुनै पनि किसिमको औषधिको प्रयोग नगरिने भएकाले यो अत्यन्तै सुरक्षित तरिका हो, हल्का चस्स दुख्न सक्छ ।
पिआरपी गर्दा सुईको माध्यमबाट गरिने भए पनि नदुख्ने मलम लगाएर गरिन्छ । त्यसमाथि पनि मसिनो सुईको प्रयोग हुने भएकाले पिआरपी गर्दासमेत दुख्दैन । ‘यो तरिका शतप्रतिशत प्राकृतिक हो’, डा. पोखरेल भन्छन् ।
विनाजानकारी कर्मचारी बिदामा, सेवाग्राहीलाई सास्ती, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरूपयोग
सन् नेपालको बिमा जागरण कार्यक्रम
उद्योग संघमा बिक्री केन्द्रको शिलान्यास
स्वाब संकलन गर्न भिटिएम अभाव
खैरहनीका योजनाहरुको अनुगमन
बँदेलबाट मकैखेती जोगाउनै मुस्किल : रातभरि किसान बारीमै जाग्राम
लकडाउनमा दुग्ध किसान: दैनिक एक करोड नोक्सान
कलिलो उमेरमा झाँगिएको प्रेम : बालिका सुत्केरी, बालक हिरासतमा
डा खतिवडा इफेक्टकर दाखिला गर्ने अन्तिम मिति असार ७, २०७७ साल
सरकार जिम्मेवार बनोस्
बाँदरमुढेको त्यो ‘कालो दिन’